Otú nyefee Music si iPod aka ka iTunes
E nwere ọtụtụ ihe nke na-eduga doro onu na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na n'elu nke ha bụ eziokwu na a onye ọrụ chọrọ na-music nchebe oge niile na enyemaka nke iPod aka mmekọrịta na iTunes dị ka kọmputa bụ mgbe ukwuu odi mfe karịa iPod nke a onye ọrụ nwere ike hapụ ihe ọ bụla oge. Iji zere nke a nsogbu onye ọrụ prefers ka mmekọrịta iPod na iTunes enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge. Otú ọ dị edinam emi-eweta na ndị ọzọ na ihe isi ike nke onye ọrụ mgbe ụfọdụ chọta manụ aka ịnagide. Na a nkuzi bụghị nanị nile dị otú ahụ isi ike ga-atụle ma onye ọrụ ga-enye ihe ọmụma na otú otu onye nwere ike imeri ihe iseokwu ndị a enweghị ihe ọ bụla nke na mmachi. Ọ na-na-kwuru na ihe kasị mma edinam atụmatụ ga-nyere ka ọrụ mere na ha pụrụ ime ya eme enweghị ihe ọ bụla nsogbu na ihe niile nzọụkwụ site nzọụkwụ nduzi ga-ga-gụnyere na nke a. Iji nweta ihe kasị mma nke ndị nkuzi ọ na-gwara iji jide n'aka na nzọụkwụ na-soro n'okpuru ọkachamara nduzi bụrụ na onye ọrụ okụt ọ bụla n'ime ha ike.
Part 1: Gịnị nyefee Music si iPod aka ka iTunes?
Part 2: otú nyefee Music si iPod aka ka iTunes
Part 3: Free ụzọ nyefee Music si iPod aka ka iTunes
E nwere dị iche iche ndapụta ruru ka nke a mmadụ mkpa iji jide n'aka na egwu na-kpọfere iTunes. The atọ n'elu ihe na-depụtara dị ka ndị a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ịmata ndapụta ruru ka nke nsogbu etịbe.
1 Echefuola music na iTunes Library mgbe nwere ndị a songs on iPod aka
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ihe karịsịa mgbe multiple iDevices na-ejikọrọ na otu iTunes ma ọ bụ synced na ya. Iji jide n'aka na ihe kasị mma a napụtara ka ọrụ na nke a ọ na-gwara iji jide n'aka na a iche iche nchekwa na-kere ke iTunes na iPod synced songs na-ahụ zigara na nchekwa nke mere na collection na-anọgide na ọnọdụ ọzọ iche iche. Ọ ga-emekwa n'aka na ndị dị otú ahụ nsogbu ahụ na-mgbe chere ihu na onye ọrụ na-aga n'ihu na-enweta songs si iPod enweghị ihe ọ bụla ngwakọta nke music na nke ndị ọzọ iDevices.
2 N'ihi na nkwado ndabere na mpaghara
Mgbe ụfọdụ onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma songs ọ bụla na enyi ma ọ bụ ikwu na ugbu a chọrọ nyefee ya ka iTunes iji jide n'aka na a ndabere e kere na ọ na-họọrọ dị ka otu n'ime n'elu ihe na nke a. The iPod bụ maa a nta ngwaọrụ ka tụnyere ọ bụla PC ma ọ bụ na laptọọpụ otú eme a ndabere na iTunes ebelata ihe ize ndụ nke ngwaọrụ vulnerability na ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-atụghị anya ọnọdụ ngwaọrụ na-efu ma ọ bụ zuru mgbe ahụ nkwado ndabere na mpaghara bụ n'ebe ahụ maka ọrụ dị ka data bụ mgbe atụle mkpa karịa ngwaọrụ.
3 Nyefee music si m ochie iPod Touch ka onye ọhụrụ na iTunes
Ọ bụrụ na mmadụ agbanweela ngwaọrụ site na agadi ọhụrụ otu mgbe ahụ, ọ dị ezigbo mkpa iburu n'obi na ngwaọrụ ọhụrụ a ga-synced na iTunes iji jide n'aka na data nke ngwaọrụ ọhụrụ na-anọgide enem na ya mere na ọ bụ atọ top mere na anyị na ndepụta. The ngwaọrụ ọhụrụ ndabere a na-ewere dị ka oké mkpa site ọrụ na ya mere ha na-eme n'aka na needful na-eme na a n'ụzọ na-bụ egwu na dị ka kwa ọchịchọ ha.
Nkebi nke 2: otú nyefee Music si iPod aka ka iTunes
Ihe kacha na ndị kasị dịrị nchebe ụzọ nke na-eme n'aka na music na-agafere si iPod aka ka iTunes enweghị ihe ọ bụla copywriting mbipụta ọ na-gwara ibudata TunesGo jidesie na kọmputa na-mgbe ahụ mmekọrịta ngwaọrụ dị ka ọ ga-ekwe ka ndị ọrụ na-arụpụta ihe kasị mma enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. The TunesGo nwere dịghị nwebiisinka mgbochi na N'ihi ya, o na-arụ ọrụ n'ụzọ na-dị nnọọ mma nke ukwuu karịa iTunes mgbe ọ na-abịa na-ebufe music ka usoro ike ndabere. Na-esonụ bụ usoro a ga-agbaso na nke a.
m. Nzọ version nke ngwaahịa a ga-ibudatara http://www.wondershare.com/tunesgo/ na a ga-arụnyere na n'elu usoro nke mere na akara ngosi na-egosi na desktọọpụ. Ozugbo mere software bụ ulo oru na iPod ga-jikọọ na usoro mere na ọ na achọpụtara.
ii. Onye ọrụ wee pịa "Detuo na iTunes ọbá akwụkwọ" na-eme ka n'aka na music ọdịnaya na egosiri.
III. Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji họrọ music si n'elu mmanya na media site n'aka ekpe menu mmanya iji jide n'aka na usoro risịrị na iPod ọdịnaya na-agafere ka iTunes.
E nweghị ndị na iTunes metụtara nwebisiinka mgbochi mbipụta.
The synced data nwere ike zigara android ngwaọrụ dị ka mma.
The data na e zigara na nke a nwere ike jisiri dị ka kwa onye ọrụ uche na ọchịchọ.
Nke a software abịa na ndụ ikike nweta nkwalite. Naanị otu oge zuo a chọrọ.
The gụgharia weebụsaịtị nwekwara ike-eji dị ka ahaziri music isi iyi.
The software nwere ofu price na-adịghị gbanwere site na ụlọ ọrụ.
E nweghị ígwé ojii nkwado ndabere na iji usoro na N'ihi ya, mgbe ọ na-ehichapụ mgbe ahụ yiri data nwekwara pua n'anya.
Nkebi nke 3: Free ụzọ nyefee Music si iPod aka ka iTunes
Na-esonụ bụ usoro a ga-soro na nke a.
m. The bọtịnụ mwube bụ na-tapped Site na Ihuenyo ịkpalite usoro.
ii. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na iCloud taabụ a pịrị n'ime ntọala.
III. The mkpa nbanye nkọwa ndị na-jupụtara na SignIn button bụ-mbadamba.
too ogologo. The data a na-ahụ na-merged iji jide n'aka na usoro-aga n'ihu.
v. Mee ọnọdụ mmasị.
vi. The @ icloud.com adreesị ozi-e na-ahụ na-kere ka mmekọrịta ndetu.
VII. The data bụ mgbe ahụ na-kwadoo.
nke Asatọ. The iCloud data ndabere a na-na-pịrị iji jide n'aka na usoro completes.
Olee otú undelete Files na iPod aka 4 & iPod aka 5
> Resource> iPod> Nyefee Music si iPod aka ka iTunes na ala